December 2019 - Page 4 of 4 - Puntland Mirror Believable Media Website
December 7, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobab ayaa ka da’aya deegaanada xeebaha Puntland 24 saac ee la soo dhaafay. Gobolada Gaardafuu iyo Bari ayaa roobabka ugu badan ka da’ayaan iyadoo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland uu roobku hayay […]
December 4, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Iyadoo la sadaaliyay in dufaano ay ku soo socdaan deegaan xeebeedyada Soomaaliya ee saran Badweynta Hindiya, Puntland ayaa ka digtay. Qoraal digniin ah oo maanta oo Arbaco ah ka soo baxay wadaaradda arrimaha […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah meelmariyay xeerka howlgabka kasoo xuquuq siinaya shaqaalaha rayidka markii ay noqdaan howlgab. 38 xubnood oo fadhiga joogtay ayaa 34 xildhibaan aqbashay xeerka, 4 ayaa ka aamusay, […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada sirdoonka iyo nabadsugida Soomaaliya ee NISA ayaa qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho habeenimadii xalay. Ninka ayaa la qabtay isaga oo aan wax dhibbaato […]
December 3, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Duufaan lagu magacaabo Pawan oo ka timid Badweynta Hindiya ayaa la sadaalinayaa in ay soo gaarto xeebaha waqooyi ee Soomaaliya maalmaha dhow ee soo socda. Duufaanta oo wadata roobab mahiigaan ah ayaa sababi […]
December 2, 2019 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah meelmariyay dib u eegis lagu sameeyay miisaaniyada 2019, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka. 118 ayaa aqbashay, 15 ayaa diiday, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed […]
December 1, 2019 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Commemoration of World Aids Day on Sunday held in Garowe, Puntland capital. Speaking at the event, director of Puntland Aids Commission (PAC) Abdikadir Mohamed Ahmed said that 486 people with HIV were found […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Munaasibada maalinta caalamiga ah Aids-ka ee adduunka ayaa maanta oo Axad ah lagu qabtay magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland. Isaga oo ka hadlayay musaasibada, agaasimaha haayada la daagalanka Aids-ka ee Puntland Cabduqaadir Maxamed […]